Isigaba seCatheter esihlala ngaphakathi abahlinzeki nefektri - China Isigaba seCatheter esihlala ngaphakathi Abakhiqizi
Uhlobo lokuphepha ingcindezi ye-IV enhle
Isixhumi esingaxutshwe nengcindezi esihle sinomsebenzi wokugeleza okuya phambili esikhundleni sethubhu lokufaka uphawu lokucindezela okwenziwe ngesandla, ukuvimbela ukubuyela emuva kwegazi ngempumelelo, ukunciphisa ukuvinjelwa kwe-catheter nokuvimbela izinkinga zokumnika njenge-phlebitis.
Iphakethe le-catheter eliphakathi nendawo
I-SINGLE LUMEN: 7RF (14Ga) 、 8RF (12Ga)
IZIMPENDULO EZIMBILI: 6.5RF (18Ga.18Ga) ne-12RF (12Ga.12Ga) ……
I-TRIPLE LUMEN: 12RF (16Ga.12Ga.12Ga)
I-catheter eqondile ye-IV
I-catheter ye-IV isetshenziswa kakhulu ekufakweni kohlelo lwemithambo yegazi emtholampilo ukuthola ukumnika / ukumpontshelwa okuphindaphindwayo, ukondla kwabazali, ukonga okuphuthumayo njll. I-catheter ye-IV ixhumana kakhulu nesiguli. Ingagcinwa amahora angama-72 futhi ingukuxhumana isikhathi eside.
Ukucindezela okuqondile kwe-catheter IV
Inomsebenzi wokugeleza phambili. Ngemuva kokuthi ukumnika sekuqedile, kuzokwenzeka ukugeleza okuhle lapho isethingi yokumnika isijikelezwa, ukusunduza ngokuzenzakalela uketshezi oluku-catheter ye-IV phambili, okungavimbela igazi ukuthi libuye futhi kugweme ukuvinjelwa kwepayipi.
Kuvaliwe ipayipi le-IV
Y uhlobo IV ipayipi
Amamodeli: Thayipha Y-01, Uhlobo Y-03
Imininingwane: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G no-26G
Iphakethe le-catheter eliphakathi nendawo (le-dialysis)
Uhlobo olujwayelekile, uhlobo lokuphepha, iphiko elinqunyelwe, iphiko elihambayo